Macluumaadka Shirkadda - Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.
Soo saaraha kombuyuutarrada hawo-qaboojiyaha ee baabuurta
Soo -saaraha hawo -qaboojiyaha baarkinka ee xirfadda leh
Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.waa hoosaad ka mid ah Changzhou Kangpurui Automotive Air Conditioning Co., Ltd. Waa warshado cilmi-baaris iyo horumarin xirfadeed leh, soo-saarka iyo iibinta kombiyuutarrada hawo-qaboojiyaha baabuurta iyo qaboojiyeyaasha hakinta baabuurta. Warshadeena waxay ku taalaa Niutang Industrial Park, Degmada Wujin, Magaalada Changzhou, Gobolka Jiangsu, waxay ku taal bartamaha Yangtze River Delta, oo ku dhegan Shanghai-Nanjing Expressway iyo Yanjiang Expressway, oo leh gaadiid ku habboon iyo muuqaal qurux badan.
Waqtigan xaadirka ah warshadu waxay leedahay in kabadan 300 oo shaqaale ah, in kabadan 20 xubnood oo kooxda R&D ah, iyo in kabadan 20 xubnood oo ka tirsan kooxda ganacsiga ganacsiga shisheeyaha.Sidaa darteed warshadeena si buuxda ayaa loo shaqeeyaa. Warshaduhu waxay dhiseen tijaabinta waxsoosaarka badeecada, tijaabinta cimri dhererka, tijaabada buuqa, tijaabinta gariirka, tijaabada gaadiidka dhabta ah iyo tijaabinta farsamada iyo shaybaarada kale ee caadiga ah. Fikradda cilmi -baarista iyo horumarinta warshadaha ayaa “dabooli doonta baahida macmiilka, hal -abuurnimada ka baxsan nafsadda” Badeecadahayaga ugu waaweyni waa taxane kombaresarada hawo-qaboojiyaha hawo-mareenka, oo ay ku jiraan KPR-30E (farsamada tamarta cusub), KPR-43E (farsamada tamarta cusub), KPR-43, KPR-63, KPR-83, KPR-96, KPR -110, KPR-120, KPR-140 compressors, iyo taxane kombaresarada piston, oo ay ku jiraan 5H, 7H, 10S, kombuyuutarrada barakicinta beddelka ah iyo qaboojiyaha Baabuurka la dhigto.
Iyada oo horumarin 15 sano ah, shirkadeenu waxay lahayd xoog farsamo oo adag iyo naqshad xoog leh iyo karti R&D. Warshaduhu waxay leeyihiin nidaamka shahaadaynta maareynta hantida aqooneed oo dhammaystiran waxayna dhaaftay IATF1 6949 shahaadada maaraynta tayada warshadaha baabuurta caalamiga ah. Warshaduhu waxay si isdaba joog ah u heleen wax ka badan 40 ikhtiraac, shatiyada wax ku oolka ah iyo muuqaalka, waxay ku guuleysteen magaca Hay'adaha Qaranka ee Tiknoolajiyadda Sare.
Waxsoosaarka warshadaha ayaa loo dhoofiyay Yurub, Koonfurta Ameerika, Waqooyiga Ameerika, Bariga Dhexe iyo Aasiya, sumadda warshadaha ayaa sumcad sare ku yeelatay suuqa caalamiga ah. Hadday tahay hadda iyo mustaqbalkaba, shirkaddu waxay si kal iyo laab ah u siin doontaa macaamiisheenna alaab tayo sare leh, tikniyoolajiyad wax soo saar xirfadeed iyo adeeg tayo sare leh oo iibka kadib ah, marnaba ha joojin sahaminta iyo horumarinta, isla mar ahaantaana la hormariya shirkadaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee Shiinaha .
Markaa fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto si aad wax u weydiiso.
Sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad timaaddo meheraddeena si aad nooga sii ogaato. Waxaana hubaal ah inaan ku siin doonno xigashada ugu fiican iyo adeegga iibinta kadib.